समाचार - टंगस्टन कार्बाइड उत्पादनहरूका तीन प्रमुख बजार के हो?
टंगस्टन कार्बाइड उत्पादनहरूका तीन प्रमुख बजार के हो?
टंगस्टन कार्बाइड उत्पादनहरूका तीन प्रमुख बजार के हो? कडा मिश्र धातु भाग मोटर वाहन, चिकित्सा, नयाँ ऊर्जा बजार कब्जा, के तपाईं यसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? के तपाईंलाई यो थाहा छ? कृपया मलाई आज यो परिचय गराउन दिनुहोस्।
यो मुख्यतया मोटर वाहन क्षेत्रमा प्रयोग गरीन्छ। मोल्डिंग पछि, sintering, धातु वा मिश्र धातु पाउडर र अन्य प्रक्रियाहरू विभिन्न उद्योगहरूमा प्रयोग सिमेन्ट कार्बाइड भागहरू उत्पादन गर्न। Of० बर्षको विकास पछि, सिमेन्ट कार्बाइड पार्टहरू बिस्तारै कास्ट फलामको भागलाई कम शक्ति र तुलनात्मक रूपमा सरल गुणहरूको ठाउँमा प्रतिस्थापन गरेर कास्टि and र फोर्जिंग पार्ट्सलाई उच्च शक्ति भागहरूको साथ प्रतिस्थापन गर्नदेखि मेशिन वा कास्टिंगको लागि एक प्रभावी विकल्प बन्न विकसित गरिएको छ। भागहरु
सिमेन्ट कार्बाइडको डाउनस्ट्रीम उद्योग ग्लोबल सिमेन्ट कार्बाइड मेशिनरी पार्ट्स उद्योगको दृष्टिकोणबाट अटो पार्ट्स, मोटरसाइकल पार्ट्स, कम्प्रेसर पार्ट्स र अन्य अन्य सामानहरू बन्न सक्छ, टंगस्टन कार्बाइड उत्पाद बिक्रीको सबैभन्दा ठूलो बजार मोटर वाहन उद्योग हो, सीमेन्ट कार्बाइडको टेक्नोलोजी भागहरू, बजार को उच्च गुणवत्ता आवश्यकताहरु।
सिमेन्ट कार्बाइड एन्डमिल, सिमेन्ट कार्बाइड, कार्बाइड उपकरणहरू, ठोस कार्बाइड अन्त मिल्स, मिलिंग कटर, कार्बाइड काटने उपकरण,